सञ्जालमा देश बनाउने गफ, सडकमा देश बदल्ने काम | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
भदौ ४, २०७६ बुधबार १६:३६:२६ | मिलन तिमिल्सिना
‘त्यो साले ट्रक ड्राइभरलाई मैले बिजुलीको पोलमा बाँध्नै खोजेको थिएँ, सालेले माफ माग्यो, अनि छोडिदिएँ’ हातमा वाकीट्वाकी बोकेर उताबाट शानसँग आउँदै गरेका प्रहरी हवल्दार आफ्नै सुरले बोले ।
‘के भयो र सर ?’ नजिकै आएपछि मैले सोधें ।
‘कति भन्नु सालेहरुलाई यो चोकबाट ठूला गाडी छिराउन पाईंदैन भनेर, आज पनि एउटाले छिराइहालेछ, अनि ओरालेर पोलमा बाँधिसकेको थिएँ, हात जोड्न थाल्यो अनि छोडिदिएँ’ हवल्दार ‘साब’ले गर्वका साथ भने ।
‘मान्छेलाई बाँध्न त कहाँ मिल्यो र ? जरिबाना तिराउने, सम्झाउने, बुझाउने होला नि’ म पनि जान्ने पल्टिएँ ।
‘कति सम्झाउनु ? कति बुझाउनु ? कति तिराउनु ?’ हवल्दार ‘साब’ झोक्किए । त्यहीबेला नख्खुबाट कलंकीतिर गुड्दै गरेको बसले धोबिघाटको जेब्राक्रसिङमा रोकेर यात्रु भर्न थाल्यो । ‘ओइ साले पख् तँलाई’ भन्दै हवल्दार ‘साब’ले वरैबाट थर्काए । सडकको पेटीसम्म मान्छे तान्न पुगेको सहचालक हतारिंदै बस भएतिर कुद्यो र ढोका ढ्यापढ्याप पार्यो । हवल्दार ‘साब’ फेरि म भएतिर आए ।
‘तपाईँ कहाँ के मा काम गर्नुहुन्छ ?’ हवल्दार ‘साब’ले सोधे । मैले आफ्नो परिचय दिएँ । मोबाइल हेर्दै गाडी कुर्दै गरेको मलाई उनले भने, ‘ए गाह्रो छ है अहिले त पत्रकारलाई पनि, फेसबुक र युट्यूबतिर पनि के–के आइरहन्छ’ हवल्दार ‘साब’ले पछिल्ला प्रसँग उप्काए । मैले टाउको मात्रै हल्लाएँ ।
उनलाई अलि धेरै गफ गर्न मन थियो क्यारे । तर म चुप लागेँ । उनी फेरि परतिर लागे ।
ललितपुरको धोबीघाट चोक । चार वर्षदेखि मेरो गाडी पर्खने प्रतीक्षालय भएको छ । कार्यालयबाट घर ओहोरदोहोर गर्ने बाटो यही हो । कीर्तिपुर–लगनखेल चल्ने बस मुस्किलले आधा घण्टामा आउँछ । त्यो पनि खुट्टो राख्ने ठाउँ हुँदैन । १० मिनेटसम्म पर्खंदा आयो भने बस चढिन्छ । नत्र लखरलखर हिँडिन्छ । मेरो आफ्नै शैली ।
बस पर्खेर, चढेर, फेरि बसबाट ओर्लिएर हिँड्नु र बस पर्खंदै नपर्खंदै लखरलखर हिँड्नुमा त्यही १५, २० मिनेटको फरक हो । बसमा जाँदा ४५ मिनेट लाग्छ, हिँडेर एक घण्टा । १५ मिनेट छिटो पुग्न १५ रुपैयाँ किन खर्च गर्नु भनेर धेरैपटक हिँड्ने गर्छु ।
त्यसमाथि बसमा भन्दा हिँड्दा छुट्टै आनन्द । बसमा गफ गर्नेहरु धेरै भेटिन्छन्, हिँड्दा आफ्नै सुरमा काम गर्नेहरु देखिन्छन् । लगनखेलबाट कीर्तिपुर जाने बसमा बेलाबेला एकजना सरकारी कर्मचारीसँग भेट हुन्छ । पहिले कीर्तिपुरको एक सरकारी कार्यालयमा काम गर्दा रहेछन् । अहिले जाउलाखेलमा सरुवा भएका रे ।
‘मैले राम्रो काम गरेको देख्न नसहेर हाकिमले सरुवा गर्यो, मलाई पनि के छ र ? हाजिर गर्छु, हिँड्छु’ सामान्य परिचयमै उनले आफ्नो कुरा सुनाए । ‘यो देशमा राम्रो काम गर्नेहरुको मूल्याँकन छैन हेर्नुहोस्, पहिलेको अफिसमा भैरहेको भए मैले के–के गरिसक्थें, अहिले हात बाँधेर राखिदिए’ उनको कुरा सुनेर म फिस्स हाँसे मात्र ।
मैले धेरै चासो नदिएको बुझेर होला हिजोआज भेट्दा उनी हाँस्छन् मात्र, पहिलेजस्तो आफ्नो बखान गर्दैनन् ।
बसमा अझ धेरै कलेजका विद्यार्थी हुन्छन् । हातमा मोबाइल खेलाएर बसिरहेका । ‘ओइ हेर त फेरि अर्को खुलासा भयो रे नि’ एउटाले मोबाइलको युट्यूबको शीर्षक देखायो । ‘हैन त्यो मान्छेले आत्महत्या नै गरेको पुष्टि भयो रे त ?’ अर्कोले भन्यो । ‘रविलाई अझै केही दिन थुन्ने भएछ, यो त अति भयो यार’ अर्को बोल्यो । उनीहरुको कुरा सुनेर अरु यात्रुले पनि कान ठाडो बनाए । ‘खै के हो के, अनलाइन र यूट्युबमा पनि के के आउन थाल्यो । देश नै यिनीहरुले चलाउने भए, के मात्र पत्याउनु’ अघिल्तिर सिटमा बसेका भलाद्मीजस्ता देखिने एक जना बोले । कलेजका विद्यार्थी आआफ्नै सुरले तर्क गर्न थाले ।
बस चढ्दा दिनहुँ यस्तै गफ मात्र सुनिन्छन् । कसैले सामाजिक सञ्जालले मान्छे बिगारेको कुरा गर्छन् । कसैले सामाजिक सञ्जालमा देश बनाएको सपना सुनाउँछन् । एकछिन सुन्नलाई झटकलाग्दो मात्र ।
तर हिँड्दा गफभन्दा धेरै काम गर्ने मान्छे भेटिन्छन् । जसलाई सामाजिक सञ्जालमा के भैरहेको छ भन्ने सोच्ने फुर्सद छैन । आफ्नै काम र मेहनतमा मात्र विश्वास छ । धोबीघाटदेखि कीर्तिपुरसम्म हिँड्दा मैले ठाउँठाउँमा काममा व्यस्त र प्रेरणादायी यस्तै मान्छे भेटेको छु ।
भेटेकामध्ये धेरैसँग भलाकुसारी गरेको छु । उनीहरुको संघर्ष र कथाव्यथा सुन्दा लाग्छ, कामको महत्व बुझेकालाई कुरामा भुल्ने फुर्सद छैन । कामप्रतिको लगाव, मेहनत र परिश्रमले उनीहरुले आफ्नो गुजारा मात्र चलाएका छैनन्, समाज परिवर्तनको महत्वपूर्ण सन्देश दिन पनि सफल छन् ।
जुत्ता सिलाउने समिर राम
परिवार सम्पन्न भएको भए, रौतहटका २३ वर्षीय समिर राम यतिबेला कलेज पढिरहेका हुन्थे । साथीहरुसँग पढाइसँगै फुर्सदमा मोबाइलमा रमाउँथे । फेसबुक र युट्यूब हेरेर देश र समाजबारे धारणा बनाउँथे ।
तर गरिब परिवारमा जन्मेका उनले समयमा लेखपढ गर्न पाएनन् । सानैदेखि रमाउनेभन्दा कमाउनेतिर ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । किताब कापी बोकेर स्कुल जाने बेला कुटोकोदालो बोकेर खेतबारी पुगेन । अनि कलेज जाने बेला विदेश हानिए । विदेशमा पनि भएजस्तो भएन । त्यसपछि उनी गाउँ फर्किए । विदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्ने उपाय खोज्दै काठमाण्डौ आइपुगे ।
धोबीघाटबाट सुन्दरीघाटतिर जाने चोकको छेउमा एउटा ठूलो छाता ठड्याइएको छ । मुश्किलले घाम पानी छेक्ने छाता मुनि बस्छन् समिर राम । दिनभर त्यहीँ बसेर छाता र जुत्ता बनाउन आउने ग्राहकको प्रतीक्षा गर्नु उनको दैनिकी हो ।
ग्राहक नआउँदा उनी मोबाइलमा गीत सुन्छन् । तर फेसबुक चलाउँदैनन् । ‘फेसबुक त खोलेको छु, तर त्यति हेर्दिन, फुर्सदमा गीत सुन्छु, नत्र काम’ रामले भने । तीन वर्षअघि मलेसिया गएर फर्किएका रामलाई फेसबुकमा भुलेर बस्ने मन छैन । दिनरात काम गरेर कमाउने धोको छ ।
विदेश जाँदा लागेको ऋण नेपालमा जुत्ता सिलाएर चुक्ता
धोबीघाट पुग्दा उनी कहिले काममा व्यस्त देखिन्छन्, कहिले फुर्सदमा । ‘भाइ ठिक छ नि’ भन्दा मुसुक्क हाँसेर टाउको हल्लाउँछन् । उनको मुस्कानले थप उर्जा मिल्छ । म उर्जाले भरिएको पाइला अगाडि सार्छु । त्यहाँबाट १० पाइला अघि पुगेपछि लुगा सिलाउन व्यस्त कुमार सुन्दासलाई भेटिन्छ ।
कपडा सिलाउने कुमार सुन्दास
बारा निजगढका कुमार सुन्दास पनि पहिले यसैगरी सडक छेउमा बसेर कपडा सिलाउनुहुन्थ्यो । अहिले सटरभित्रै बसेर लुगा सिलाउने काम पाउनुभएको छ ।
उहाँका पनि आफ्नै कथाव्यथा छन् । सानैदेखि बाबुबाजेले गर्दै आएको पुख्र्यौली पेशा धान्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । अक्षर चिन्नुभन्दा पहिले काम जान्नु पर्यो । काम जान्न थाल्दा अक्षर चिन्न पाइएन । त्यसपछि दुःखका दिन सुरु भए ।
गाउँघरमा लुगा सिलाउँदा भनेजस्तो कमाइ नभएपछि दुबई पुग्नुभयो । त्यहाँ काम राम्रै थियो । विदेश गएका धेरैलाई एजेण्ट र म्यानपावरवालाले धोका दिन्छन्, तर उहाँले चाहिँ श्रीमतीबाटै धोका पाउनुभयो । विदेशमा दुःख गरेर कमाएको सबै पैसा बोकेर श्रीमती अन्तै हिँडिन् । त्यसपछि कुमारको जिन्दगीमा अर्को कालो बादल मडारियो ।
रित्तिएको जिन्दगी र खल्ती भर्नका लागि कुमार धोबीघाटको सडकमा बसेर लुगा सिलाउन थाल्नुभयो ।
दुबईमा लुगा सिउँदा निजगढमा मायाको ‘धागो’ चुँडियो !
अहिले उहाँ सडकबाट सटर पुग्नुभएको छ । उहाँको सीप र मेहनत देखेर नजिकैको लुगा सिलाउने पसलवालाले उहाँलाई काममा लगाएका हुन् । सटरभित्र काम गर्न थालेपछि जिन्दगीको अँध्यारो बाटोमा अलिअलि उज्यालो देखिन थालेको छ । उहाँलाई पनि गफगाफ र सामाजिक सञ्जालमा आएका कुरा हेर्ने र सुन्ने फुर्सद छैन । काममा मात्र ध्याउन्न छ ।
‘फुर्सदिलाले हो हजुर गफ गर्ने, हामीलाई त कामभन्दा अर्को कुरा सोच्ने फुर्सद नै हुँदैन’ लुगा सिलाउने मेशिन चलाउँदै उहाँले भन्नुभयो । कुरामाभन्दा काममा ध्यान दिने हो भने जिन्दगीका जतिसुकै अप्ठ्यारा बाटोमा पनि सहज खुड्किला बन्न थाल्छ भन्ने सन्देश दिन उहाँ सफल हुनुभएको छ ।
श्रीमानलाई विदेशबाट फर्काएर चिया बेच्ने उर्मिला
कुमारले काम गर्ने पसलबाट झण्डै ५ सय मिटर अगाडि बढेपछि सुन्दरीघाट पुगिन्छ । झोलुंगे पुल तर्नेबित्तिकै बाटो छेउमै छ, गोरखाकी उर्मिला थापाको चिया पसल । चिया पसलमा थरिथरीका मान्छेको जमघट भैरहन्छ । फेसबुके टिप्पणीदेखि राजनीतिका कुरा भैरहन्छ । तर उर्मिला र उहाँका श्रीमान विवेकलाई यी सबै कुरा सुन्ने फुर्सद छैन ।
'अरुका कुरा सुनिन्छ मात्र, हामीलाई त गफ गर्ने फुर्सद नै हुँदैन’ चिया पकाउँदै गरेकी उर्मिलाले भन्नुभयो । पहिले उर्मिला एक्लैले चिया पसल चलाउनुभएको थियो । श्रीमान विवेक वैदेशिक रोजगारीको लागि बहराइन पुग्नुभएको थियो । तर बहराइनमा विवेकको कमाइभन्दा सुन्दरीघाटमा उर्मिलाको चिया पसलको कमाई धेरै हुन थाल्यो । अनि घर बिदामा आएका विवेकलाई चिया पसल छोडेर बहराइन फर्किन मन लागेन । श्रीमान श्रीमती मिलेर चिया पसल चलाउनुहुन्छ । चिया पिउनेहरुको गफ सुन्नुहुन्छ । तर अनावश्यक गफमा मिसिनुहुन्न । चित्त बुझ्ने कुरामा मात्रै सही थाप्नुहुन्छ ।
चिया बेचेर बहराइनबाट श्रीमान फर्काउने उर्मिला
‘बोलेर होइन, गरेर देखाउनुपर्छ’ विवेक भन्नुहुन्छ, ‘यो देशमा गर्नेभन्दा धेरै बोल्ने र आफ्नो कान नछामी कागको पछि लाग्नेहरु धेरै छन् । देश साँच्चै बदल्ने हो भने सामाजिक सञ्जालमा होइन, काममा रमाउनुपर्छ ।’ सबैले आआफूले जाने र सिकेको कुरा गर्ने हो भने जुनसुकै क्षेत्रमा पनि राम्रो अवसर रहेका विवेक र उर्मिलाको अनुभव छ ।
माथिका यी पात्र त उदाहरण मात्र हुन् । काठमाण्डौका सडक र गल्लीमा यस्ता उदाहरणीय र प्रेरणादायी पात्र धेरै छन् । जो सामाजिक सञ्जालमाभन्दा काममा रमाउँछन् । मेहनत र परिश्रममा विश्वास गर्छन् । यो विश्वासले उनीहरुको गुजारा त चलेको छ नै, अरुलाई पनि मेहनत र परिश्रममा विश्वास गर्न प्रेरणा दिएको छ ।
आलेख : नयाँ शैलीमा हुन थाल्यो मानव बेचबिखन
माघ ७, २०७६ मंगलबार
दुईदिने राष्ट्रिय युवा सम्मेलन सुरु : पढ्ने वातावरण बनाइदिन स...
नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वारा विराटनगरको एकीकृत जाँच भन्स...
शीर्ष वरीयताका राफेल नाडाल अष्ट्रेलियन ओपन टेनिसको दोस्रो चरण...
मोदीलाई प्रधानमन्त्री ओलीकाे नेपाल भ्रमणकाे निम्तो, मोदीले भने...
बैंकहरुले धेरै नाफा कमाएको देखेर नआत्तिन उद्योगी व्यवसायीहरु...
सुनकाे भाउ ताेलामा तीन सय रुपैयाँले बढ्याे
दुःख बिर्साउने कालिञ्चोक : बाटोभरि ‘गाइच’, ‘ब्रो’ र हिउँको 'शो'
मकवानपुरको रिसोर्टमा अचेत भेटिएका ८ भारतीयकाे ज्यान गयाे
सभामुखमा अग्नि सापकाेटाकाे उम्मेदवारी, राजपा नेता कर्णकाे पन...
सभामुख पदमा काङ्ग्रेसले उम्मेदवारी नदिने
प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री माेदीद्वारा 'स्विच' थिचे...
नक्कली करार सम्झौताको पासोमा श्रमिक
देशभरि नै पश्चिमी वायुकाे प्रभाव, मध्य–सुदूरपश्चिमका उच्च पहाड...
विग ब्यासमा सन्दीप सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीको पाँचाैँ स्थानमा
प्रहरीकै गाडीमा ट्राफिक प्रहरीको ‘ह्विल लक’, प्रमुख भन्छन : नियम मिच्नेको पद र अनुहार हेरिन्न
एमसीसी र आईपीएसबीच धेरै भिन्नता छन् : अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरी
शाही सदस्यकाे पदबाट पछि हट्नुकाे अन्य कुनै विकल्प थिएन : राजकुमार ह्यारी